नेपाल, हङकङ र पिएनजी मध्ये १ टिमलाई एकदिवसीय मान्यता, नेपालको सम्भावना कति?
फागुन २८, २०७४| प्रकाशित २२:११
काठमाडौं– आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनोट प्रतियोगिताको समूह चरणका खेल सकिएका छन्। समूह 'बी' मा रहेको नेपालले अन्तिम खेलमा सोमबार हङकङलाई ५ विकेटले पराजित गरेसँगै नेपालले चौथो स्थान हात पार्यो।
नेपालको जितले अफगानिस्तान समूह 'बी' मा रनरेटमा अघि रहदै सुपर ६ मा पुग्न सफल भयो। अफगानिस्तानसँगै आयोजक जिम्बावे र स्कटल्यान्ड पनि समूह 'बी'बाट सुपर ६ मा पुगेका छन्। नेपालसँग पराजित भएपछि हङकङको सुपर ६ पुग्ने सम्भावना सकिएको छ।
समूह 'ए' बाट वेस्ट इन्डिज, आयरल्यान्ड र युएई सुपर ६ पुगेका छन्। नेदरल्यान्ड्स र पपुवा न्युगिनी (पिएनजी) समूह चरणबाट बाहिरए।
समूह चरणको अन्तिम दिन वेस्ट इन्डिजले नेरल्यान्ड्सलाई ५४ रनले, आयरल्यान्डले युएईलाई २ सय २६ रनले र नेपालले हङकङलाई ५ विकेटले हराए। जिम्बावे र स्कटल्यान्ड बीचको खेल भने बराबरीमा सकियो। दुवै टिमले समान २१० रन बनाए।
रनरेटमा पछि परेको नेपालको सुपर ६ यात्रा सकिएपनि अब एकदिवसीय मान्यताको बाटो भने बाँकी छ।
प्रतियोगितामा सहभागि ६ एसोसिएट मध्ये शीर्ष ३ टिमले एकदिवसीय मान्यता पाउने निमयअनुसार सुपर ६ पुगेका स्कटल्यान्ड र युएईले मान्यता पाएका छन्। सुपर सिक्स ६ पुग्न असफल नेदरल्यान्ड्सलाई आइसिसीले यसअघि नै एकदिवसीय मान्यता दिइसकेको छ। अब सुपर सिक्समा पुग्न असफल भएका नेपाल, हङकङ र पिएनजी मध्ये एक टिमले एकदिवसीय मान्यता पाउनेछन्। बाँकी २ टिम डिभिजन–२ मा झर्नेछन्।
नेपालको सम्भावना कति?
नेपालले प्ले अफमा पपुवा न्युगिनीसँग बिहीबार खेल्नेछ। पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गरे नेपालको एकदिवसीय मान्यता पाउने प्रवल सम्भावना हुनेछ। अर्को प्ले अफमा हङकङ र नेदरल्यान्ड्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो खेलमा नेदरल्यान्ड्स विजयी भए नेपालले अन्तिम प्ले अफ अघिनै एकदिवसीय मान्यता पाउनेछ। नेदरल्यान्ड्स पराजित भएमा नेपाल र हङकङबीच खेल हुनेछ। विजेताले एकदिवसीय मान्यता पाउनेछ।
पिएजनीसँग पराजित भए नेपालको एकदिवसीय मान्यता पाउनेछैन।
congratulations Ra PNg sng ko khel hunu bhnda pahile kehi chiz sudhar nu Jaruri chha kina bhne batting samashya Batting ko Haina jsto lagxa ho ta line up Ra jimewar Aasha Xa pNg sang ko khel ma purai Tournament ko Run dekhna Milos Ra Nepal le Odi status payara Nepal frkin Paris ..Best of luck Nepali team
madhu Sudan Khadka
Jaga Lamka chamka he bir Nepali ho aafnai paurakhle........
Sagar pun magar
Mo k vanna chanxau vane fari aaune khel ma aaghai ramro hos ra hami Nepali ko and hamro Nepal ko name rakhne kam garnush ra aaune khale ma aaghai ramro hos vanna chanxau All the best